Kooxaha Lazio iyo Milan oo dhibcaha ku kala qeybsaday Stadio Olimpico – Gool FM
Kooxaha Lazio iyo Milan oo dhibcaha ku kala qeybsaday Stadio Olimpico
(Serie A) 25 Nof 2018. Kooxaha Lazio iyo Milan ayaa dhibcaha ku kala qeybsaday Stadio Olimpico, kadib markii ay isku wajaheen mid ka mid ah kullamada 13-aad ee horyaalka Serie A, waxayna 90-ka daqiiqo ee ciyaarta ku soo idlaatay barbaro 1-1 ah.
Labada kooxood ayaa kulankan ku bilaawday si adag, iyadoo labada dhinacba ay si xoogan u doonayeen in ay kulankan ka tirsanaa kulamada 13-aad ee horyaalka Talyaaniga ay ka qaataan 3-da dhibcood.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa waxay labada kooxood Lazio iyo AC Milan ku kala nasyeen barbaro 0-0.
Qeybta labaad marka dib leysugu soo laabtay ayay markale labada kooxood halkooda kasii wadeen kubad ku saleysneed weerar iy weerar celis, waxayna labada dhincaba abuureen fursado halis ah
Laakiin jawiga ciyaarta ayaa mar qura isbadalay kadib markii ay kooxda AC Miln la timid goolka hogaanka waxaana daqiiqadii 78-aad goolkan u dhaliyay Franck Kessie, oo caawin ka helay Davide Calabria, ciyaarta ayaana sidaas ku noqotay 1-0.
Wiilasha tababare Simone Inzaghi oo ku sugnaa garoonkooda Stadio Olimpico ayaa waxay isku dayeen in ay helaan goolka barbaraha iyagoo sameeyay fursado badan, balse waxay ku guuldareysteen inay sameeyaan taabashada ugu dambeysa.
laakiin ugu dambeyntii tababare Simone Inzaghi ayay mar qura neefta ka fuqday kadib markii ay dhaliyeen goolka barbaraha daqiiqadii 90+4 ee waqtigii dheeriga ahaa ee lagu daray ciyaarta, waxaana goolkan dhaliyay Joaquin Correa
Ugu dambeyn ciyaarta ayaa ku soo idlaatay barbaro 1-1 ah ay dhibcaha ku kala qaateen kooxaha Lazio iyo AC Milan
Muxuu ka yiri Thomas Tuchel suurtogalnimada ay kaga qeyb gali karaan Neymar iyo Mbappé kulanka Liverpool ee Champions League?
Maxay ahayd fal celintii uu sameeyay Maurizio Sarri kadib guuldaradii Tottenham? waxaa ka jawaabaya David Luiz